April 2011 ~ Rohingya Blogger
Kaladan Press News Maungdaw, Arakan State: Aung Zaw Win, the Upper House parliament member (MP) from Maungdaw Township, accompanied by three other State level MPs of Maundaw Township, visited Maungdaw on April 25 after the parliamentary meetings at Nay Pyi Taw and Sittwe, the capital of Arakan State, saidaparticipant of the meeting who asked not to be named. “It is the first time the MPs visited Maungdaw after the parliamentary meetings at Nay Pyi Taw and state level Hluttaw representative meetings to explain among the local people what they had done for the people, and the future plans and programs of the new democratic government.”
Upper House MP Aung Zaw Win, accompanied by the state level MPs U Mra Aung, U Tha Khin, U Janheingir (a) Aung Myo Myin, and an electrical engineer named U Tin Maung Win from Rangoon, visited Maungdaw Township. Read More
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကတိမတည်ဟု ဒေသခံများပြော
4/29/2011 နိရဉ္စရာ သတင်း တာကလူး
ကြံ့ဖွံ့ ပါတီသည် ပေးထားသော ရွေးကောက်ပွဲကတိကို မတည်ကြောင်း ဒေသခံများက စွပ်စွဲ ပြောကြားလိုက်သည်။
Written by: Tanvi Pate
Only just in mid April, Thailand announced that it would close down nine refugee camps on its 1400 kilometres long eastern border with Myanmar. It’s important to consider as to why Thailand wants to end its twenty years humanitarian policy of assisting refugees? What kind of prospects might be faced by the refugees once they are back in Myanmar? What are the views of the Nongovernmental Organisations (NGOs) and what other options are in pipeline for the refugees that might enable them to escape this bleak scenario? This article considers these various questions and suggests some policy options for Thailand at the end.Burmese Refugee Camps. Source: http://australiankarenfoundation.org.au/9.html Read More
Dhaka ,Friday 29 April 2011 By-Syful Islam
By LALIT K JHA Thursday, April 28, 2011 WASHINGTON — Asserting that the Burmese government remains one of the world‘s worst human rights violators and that it severely restricts religious practice, an independent, bipartisan US federal government commission on Thursday urged US President Barack Obama to retain targeted sanctions In this photo taken on April 17, Burmese Buddhists visit Rangoon’s Shwedagon pagoda during the Thingyan festival. (Photo: Getty Images) against the Burmese military junta until it takes steps to meet benchmarks established in UN resolutions and US law. Read More
Burma’s Missing Dots – The Emerging Face of Genocide
This book isadamning account of the twists and tricks of racists in Burma, including the SPDC, to pervert the history of Arakan to dehumanise the Rohingya people. It comprisesanumber of scholarly and assorted articles by Dr. Abid Bahar who has researched the plight of the Rohingya people since 1978, when he witnessed first hand one of the many periods of expulsion of Rohingya from Burma.
Dr. Bahar’s works details the plight of the refugees and also seeks to unearth the history of the Rohingya people, and the attempts over many years to deny the Rohingya citizenship of Burma, and the acts of genocide committed by the SPDC and their cohorts among fascist Rakhine ultranationalists. Read More
2011-04-27, RFA News ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်က မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ အခုချိန်မှာ ပြန်ပို့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မိမိတို့ ယုံကြည်ကြောင်း လူဦးရေ ၊ ဒုက္ခသည်နဲ့ ရွှေ့ပြောင်း အခြေချသူများအရေး ဆိုင်ရာ အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Eric Schwartz က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။(Photo: AFP)ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်အနီး ထမ်ဟင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ခိုလှုံနေထိုင်နေကြသော မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)RFA နဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် ဧပြီ ၂၅ ရက် တနင်္လာနေ့က အခုလိုပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Read More
14 Myanmar citizens held in Bangladesh
Sun, Apr 24th, 2011 6:18 pm BdST
Dhaka, Apr 24 (bdnews24.com) -- Members of the Detective Branch (DB) have arrested 14 Myanmar citizens from the capital. Deputy commissioner (south) Monirul Islam atapress meet at the agency's office on Sunday said, "We arrested 16 people, including two Bangladeshi nationals, form Fakirapul on Saturday evening." They were trying to leave the country with Bangladeshi passports.
စီးပွားရေး၊စစ်ရေး ရိုဟင်ဂျာအရေး BBC Burmese
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာလေတပ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းဟာ ဒီနေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသမတ၊၀န်ကြီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဘိုးရှိတယ်လို့ဒကားကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။
မြန်မာလေတပ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ခရိးစဉ်ဟာစီးပွားရေး၊စစ်ရေးရိုဟင်ဂျာအရေးတို့ကိုအဓိကထားဆွေးနွေးဖွယ်ရှိကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့တပ်ကအရာရှိဟောင်းဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ကသုံးသပ် ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်နားမှ မြန်မာဘက်ကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုတိုးချတာ၊ဒုံးပျံတွေချတာ၊ရခိုင်ပြည်နယ၊်အမ်းမြို့ဝန်းကျင်မှာ လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတခုထားတာ၊နှစ်နိုင်ငံခြံရိုးကာပြီး စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုလုပ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာအပေါ်တရုတ်ဖိအားပေးမှုနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နိုင်ပြီး၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တရူတ်ကုန်သွယ်မှုဟာမြန်မာကအက္ခရာကျနေတယ်လိှု့ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ကဆိုပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းအလည်အပတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့စစ်ရေးပုးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲစီးပွားရေးဦးစားပေးပြီး ရေနံတူးဖေါ်ရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ရေပိုင်နက်ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်လိုို့ှ့ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ကသုံးသပ်ပါတယ်။
16 Burmese Citizens Arrested in Bangladesh
Dhaka: 16 Burmese citizens were arrested by Bangladesh police on Sunday in Dhaka when they were preparing to travel abroad on Bangladesh passports, according toapolice report. The report said they were arrested in the Fokirapur area in Dhaka on 24 April, and all arrestees are Burmese Muslims who were traveling to the Middle East through Bangladesh to look for work. Detective Minurul Islam told journalists in Dhaka after the arrest that the police department will be unveiling clues regarding the incident. "We must disclose who provided the Bangladesh passports to Burmese citizens and which travel agents are involved in the incident," he said. In another incident, Bangladesh border security forces arrested 45 Burmese Muslims on Sunday in the border area of Teknaf as they were entering Bangladesh through border points along the Naff River, which demarcates the border between the two countries. The 45 Burmese citizens were handed over to Bangladesh police after their arrest by Border Guards Bangladesh. Link : http://www.narinjara.com/details.asp?id=2931 Read More
I have Never Heard of the Name “Rohingya”
Dr.Abid Bahar Ph. D.
Well, the above can’t be my statement. Those of you, who know me, know, I have been working with the Rohingya people and Burma for the past 31 years. But surprisingly Burmese people who lived with Rohingyas are the ones who claim that they have never heard of the name “Rohingya.” It is as if saying I have never met my brother, or I have never seen my neighbour; sounds strange to me but not funny. Such assertion about an ethnic group aimed at intentionally ignoring them is called xenophobia, fear of the stranger. When Rohingyas as Burmese are made into strangers by the Rakhine gentlemen like Aye Kyaw and Aye Chan and the monk Ashin Nayaka in their statements and in their writings, it is more than xenophobia but is called racism. A matter of extreme intolerance: an idea that also goes against even Buddhism.
[Author’s note: This paper is based on author’s speech at the PENN HUMAN RIGHTS FORUM on “The Rohingyas of Burma and Bangladesh” on Friday, March 31, 2006 in the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. The material in this paper came from author’s personal contacts with the Rohingya Diaspora community and information that is available in the reports of various human rights groups, notably the Amnesty International, the Human Rights Watch and the Karen Human Rights Group.] Part 1: Nightmare, fiction oraliving reality?Imagine this. You are living inacountry that does not recognize you asacitizen in spite of the fact that your forefathers lived there for centuries. If that were not enough ofatraumatic experience, consider that other ethnic groups who are fighting the regime for self-determination and human rights consider you as outsiders. It must be your worst kind of nightmare when you realize that half of your people have been forced to take asylum or refuge outside, and you may be the next in line to seekaway out of this living hell.
By LALIT K JHA Saturday, April 23, 2011 A view of the Kutupalong unofficial Rohingya refugee camp in Bangladesh. (Photo: Alex Ellgee/The Irrawaddy) WASHINGTON— Noting that Rohingya refugees faceadesperate situation in Bangladesh,aWashington-based non-profit organization has urged Australia, Canada, the US and Britain to work with the Bangladeshi government to strengthen protection and humanitarian assistance and reduce sexual and gender-based violence.“The situation is desperate for Rohingya refugees in Bangladesh,” said Lynn Yoshikawa, of Refugees International. In its report, “Bangladesh: The Silent Crisis,” Refugees International said hundreds of thousands of Rohingya refugees who fled repression in Burma have no protection from abuse, starvation and detention in Bangladesh because ofalack of documentation.
Aung San Suu Kyi(The 2011 TIME 100)
Meet the most influential people in the world. They are artists and activists, reformers and researchers, heads of state and captains of industry. Their ideas spark dialogue and dissent and sometimes even revolution. Welcome to this year's TIME 100ead more: One of the world's most celebrated advocates of democracy is facing prison time afterabizarre visit by an American who swam to her home. Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi was charged with violating the terms of her house arrest and moved to prison after John Yettaw was caught swimming away from her lakeside compound on May 5. Suu Kyi, the winner of the 1991 Nobel Peace Prize, has been under house arrest for 13 of the past 19 years after clashing with the country's brutal ruling junta. The charges against Suu Kyi, who is 63 and reportedly in poor health, come just weeks before the scheduled end of her detention and carryasentence of up to five years. Yettaw, 53, reportedly stayed for two nights in her central Rangoon compound after arriving unexpectedly from the lake complaining of cramps and exhaustion. He also faces prison time. A lawyer for Suu Kyi called Yettawa"nutty fellow" and says she pleaded with him to leave. Some observers say the military is seizing on the incident to prolong Suu Kyi's detention and discourage pro-democracy forces ahead of next year's elections. (See pictures of Burma after Cyclone Nargis.) Read More
Myanmar keen to resolve Rohingya problem thru negotiation: New Envoy
Dhaka, Apr 21 (UNB) - Myanmar is keen to resolve all problems including that of the Rohingyas through negotiations by the two democratic governments.
This was conveyed by newly appointed Myanmar Ambassador to Bangladesh U Min Lwin when he presented his credentials to President Zillur Rahman at Bangabhaban on Thursday.
The new Ambassador said the democratic government established in Myanmar recently has decided to resolve all problems with the neighboring countries through discussion and negotiation.
He mentioned that the newly elected Myanmar President has decided to visit the Asian countries and start the state visit first from Bangladesh which is considered the closest neighbor of Myanmar.
Rohingya women flee Myanmar to face rape and abuse in Bangladesh
A Rohingya mother from Myanmar carries her child insideamakeshift hut inarefugee camp in Cox's Bazaar August 17, 2009. Rohingyas, not recognised as an ethnic minority by Myanmar, allege human rights abuse by its authorities, saying they deprive Rohingya of free movement, education and rightful employment. REUTERS/Andrew Biraj
ByaTrustLaw correspondent
BANGKOK (TrustLaw) – Tens of thousands of stateless Muslim Rohingya women and girls who fled persecution in Myanmar for safety in Bangladesh are facing abuse and sexual violence at the hands of Bangladeshis and members of their own refugee communities with little chance of redress,ahuman rights group said in its latest report.
KUALA LUMPUR: Malaysia has made some improvements in its treatment of refugees, according toareport by the Washington based Refugees International (RI). The report, which hasaspecific focus on Burmese refugees, said Malaysian authorities in the past year made no attempt to deport refugees and showed that they had increased their respect for identity cards issued by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).It noted that since 2009, the number of registered refugees in Malaysia had increased from 45,000 to more than 80,000.About 90% of them are from Burma, where ethnic minorities like the Chin, Rohingya and Karen are said to be subject to systematic human abuses.
Rohingyas face ‘silent crisis’ in Bangladesh – rights group
Rohingya refugee children from Myanmar write during lessons ataschool inarefugee camp in Cox's Bazaar, Aug. 17, 2009. REUTERS/Andrew Biraj
BANGKOK/DELHI (AlertNet) – Tens of thousands of stateless Rohingya refugees in Bangladesh face abuse, starvation and detention ina"silent crisis" that could lead toahumanitarian emergency if the authorities do not do more to protect them,areport by Refugees International (RI) said.
Rohingya Refugees Suffering From Lack of Documentation in Bangladesh
Washington, DC – Hundreds of thousands of Rohingya refugees who fled repression in Burma have no protection from abuse , starvation, and detention in Bangladesh because ofalack of documentation, Refugees International highlighted inareport released today. In the report, Bangladesh: The Silent Crisis, Refugees International is urging the international community to work with the Bangladeshi government to register undocumented refugees and improve protection for all vulnerable Rohingyas.
Burmese Pro-Democracy Activists Launch Petition Drive
Members of the Burmese Democracy Network (BDN) launchedapetition drive on Sunday urging the new government to release all political prisoners unconditionally and to create an environment where Burmese people living abroad, organizations in exile and refugees can return home safely.
The BDN is the name of the unofficial network of people that has formed at the urging of Aung San Suu Kyi following her release in Nov. 2010. Members of this network have now initiatedacampaign, which began on the Burmese New Year, the goal of which is to get people to signaletter to President Thein Sein requesting that he agree to the group's demands.
Patients must expend exorbitant sums to get passes for treatment in Bangladesh
Kaladen News :
Maungdaw, Arakan State: Patients from Arakan State who wish to cross the border into Bangladesh for medical treatment have to spendalarge amount of money in order to receive border passes from the concerned authorities of Maungdaw, saidapatient who has been to Bangladesh for treatment.
“At present, in Burma, there are no available medicines or specialist doctors in northern Arakan, so patients who are suffering from serious diseases, such as heart disease, kidney failure, cancer, chronic ulcers, Hypertatist B or C, are very unfortunate. A few of them are able to go to Bangladesh for treatment, but only those who can afford the expenditures. The rest of patients die without proper medical treatment in their hometowns.”
Muslim Prime Ministers and Ministers of Arakanese Kingdom
AFK JILANI According to Daulat Kazi" The king made Ashraf Khan his Chief Minister and the commander of his army. One day the king Thiri Thudama (Salim Shah 11) went on hunting expedition with his army. The king with his army stayed there for four months. The chief minister returned to his court with the permission of the king. When Ashraf Khan sat in the court the Mughal, the Pathans and numerous Hindus sat in rows. Asharaf Khan was like full moon in its sixteen parts." Asharaf Khan was virtually in charge of conducting all state affairs.(Missing Links in Arakan History By S.n. Goshal P-258.)Sri Bara Thakur was the Lasker Wazir or war minister or defence minister of the king Narapatigyi (1638-1645 A.D.) The war minister Sri Bara Thakur was blessed withason by praying to God. Read More
Secretary Clinton speech about Rohingya in "Remarks at Rathenau Prize Ceremony"
Berlin, Germany April 15, 2011.
SECRETARY CLINTON: Thank you. Thank you so much for this extraordinary honor. It meansagreat deal to me personally and on behalf of my government and my country. I want thank Herr Gothelf for your kind remarks and for your leadership of the institute, and to Deutsche Bank and others for hosting us. Thank you. And to my friend and colleague, the foreign minister, I have so enjoyed our working relationship together, and I appreciate the very kind words said about me. But more than that, I appreciate our cooperation and our partnership. There isalot of work to do in the world when you areaforeign minister, probably at any time of history, but it seemsaparticularly complex agenda facing Guido and me on behalf of both of our countries. So I am personally and – very touched and very grateful to you.
အမေရိကန်သမတ ဘာရက် အိုဘားမားဟာ လက်ရှိ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်က အရာရှိတဦးဖြစ်သူ မစ္စတာ Derek Mitchell ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးသံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
မစ္စတာ Derek Mitchell ဟာ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ ဒုတိယ လက်ထောက် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပိတ်ဆို့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဒု-လက်ထောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Derek J. Michell ဖြစ်ပါသည်။ အရေးယူမှုကို ထောက်ခံသလို မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ Read More
US Congressman Rohrabacher's statement on Burma
Washington, Apr 20, 2010 - I rise to draw attention to the on-going plight of the people of Burma, now referred to as Myanmar. Shortly after the Second World War, Burma was granted its Independence from Great Britain. With Democratic institutions in place, rich natural resources, and an educated population, it was expected that Burma would becomeawealthy and stable country. Sadly, that country, with so much potential, has been dominated byacorrupt tyrant, and despite its vast wealth its people suffer in abject poverty. Read More
US urges Myanmar to free political prisoners
WASHINGTON (AP) — The most important step Myanmar can take to improve its international relations is to free its more than 2,000 political prisoners,aU.S. official said Monday, as Washington prepares to appointaspecial envoy to the country.
Joseph Yun, deputy assistant secretary of state for East Asian and Pacific affairs, described the November release of opposition leader Aung San Suu Kyi after years of house arrest as "very significant."
But Yun urged Myanmar to go further. He described the government recently installed after elections that were boycotted by Suu Kyi's party as "much the same people as before," which means they are dominated by the military.
It is the first easing of curbs since they were imposed in 1996 in response to abuses by the military junta.It follows the swearing-in last month ofanew nominally civilian government.
An unknown chemical weapon is being developed in highly-secured areas in the country’s north, by workers wearing protective suits and guarded by Burmese military personnel, according to witnesses.
The secret site where the weapon is being developed is situated in Mabein Township, in southern Shan State, close to the border with Kachin State, according to locals and timber loggers.
လင်းသန့် (Irrawaddy News)
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေးကင်တာနာသည်မြန်မာအစိုးရသစ်ထံ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိရေးအတွက် စာရေးတောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိသည်။
လာမည့် မေလတွင် မြန်မာပြည်သွားရောက်ခွင့်ရရေးအတွက် ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့ရှိ မြန် မာ ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သော အစိုးရသစ်ထံသို့ စာရေးတောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Read More
Six Myanmarese men held in Tripura, sent to jai
Agartala : Six Myanmarese men were arrested for illegally entering India from Bangladesh and were sent to 14 days judicial custody Wednesday, police here said. The arrested men said they had crossed over in search of jobs and complained of untold harassment by the Myanmarese authorities."Acting onatip-off, security forces arrested the Myanmarese nationals fromamarket at Bishramganj in western Tripura Tuesday night. On Wednesday, the detainees were presented beforealocal court, which sent them to 14 days' judicial custody,"apolice official told reporters.
Cox's Bazar: A 19-member delegation comprised of diplomats from western countries has recently visited the Burmese Muslim refugee camps in southeastern Cox's Bazar District in Bangladesh. The team visited the Kutupalong and Nayapara official refugee camps in Cox's Bazar on6April, 2011, and assessed the living conditions, health, and education of the refugees, saidarefugee from Kutupalong Camp. Read More
Burma’s Muslims Are Long-standing Victims of Military Regime
Washington -- Although largely unaffected by Burma’s 2007 pro-democracy protests and the subsequent crackdown by the military government, the country’s Rohingya Muslim population, an isolated group in Northern Rakhine State (NRS), remains oppressed by Burma’s rulers and depends on international donors for survival.The estimated 728,000 community members live as virtual prisoners asaresult of the military junta’s oppression of religious and ethnic minorities. The government’s long-standing campaign to “Burmanize” the population even has included the coerced conversion of Rohingya Muslims to Buddhism.
The United States considers the Muslim Rohingya people, who live mainly in the Burmese state of Northern Rakhine, to beareligious and ethnic minority that is being persecuted by the country’s military regime. Read More
United States has resettled some Rohingya referred by U.N. agency By Stephen KaufmanStaff Writer
Washington — The Obama administration says countries to which Burmese Rohingya migrants have fled should carefully screen them — with the involvement of the U.N. High Commissioner for Refugees (UNHCR) — to determine if they need protection.The United States considers the Muslim Rohingya people, who live mainly in the Burmese state of Northern Rakhine, to beareligious and ethnic minority that is being persecuted by the country’s military regime. Read More
Withoutahomeland, withoutahope By Tony Cliff
COX'S BAZAR, Bangladesh - Mahamuda Khatur remembers the fateful day three years ago. At dawn her husband had left their Kutupalong refugee camp in southern Bangladesh for the forest to fetch firewood he would sell to other refugees or local people. He never returned.
Mahamuda was told that he had drowned inariver,aclaim she has never independently verified. That left her asa27-year-old widow with two children. Now, suffering from tuberculosis for eight months, Mahamuda is too weak to work and cannot feed herself or her children.
No place to live for Rohingya
Teknaf, Bangladesh: The Arakanese Rohingya who are living in the Lada Refugee Camp are facing risks to their lives due to the condition of their shacks, according toarefugee leader from the camp.A shack fall down in Lada refugee camp“The shacks are no longer strong or sturdy as they are all now at least three years old. They are built only with bamboo and plastic sheets.”“Now, some shacks have fallen completely and the refugees fear for their lives while they are sleeping during the night.”“We fear for young children who mostly stay in the shacks if heavy wind blows in the daytime or night,” said Ammena,amother of four children.
Burma and the UK Government about rohingya
Questions asked by Baroness Goudie at the House of Lords on 5th of April 2011 .To ask Her Majesty’s Government what meetings United Kingdom government officials have had with representatives of the Rohingya ethnic minority in Burma.[HL8101] The Minister of State, Foreign and Commonwealth Office (Lord Howell of Guildford): The Government are deeply concerned about the situation facing the Rohingya people. Foreign and Commonwealth officials in London often meet with the Burmese Rohingya Organisation and the Arakan Rohingya National Organisation-most recently on 10 March 2011. Our embassy in Rangoon meets onaregular basis withawide range of ethnic groups. The Government remain committed to advocating fundamental freedoms and greater respect for human rights for all ethnic groups in Burma including the Rohingya.
နိုင်ငံခြားသား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း မီးလောင်
ဘန်ကောက် (မဇ္စ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၅၀ ခန့် ထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် မလေးရှားနိုင်ငံ ဆီရန်ဘန် Serenban ခရိုင်ရှိ လင်းခေး နိုင်ငံခြားသား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၌ ထိန်းသိမ်းခံများ၏ ရှို့မီးကြောင့် ယနေ့ည ဒေသစံတော်ချိန် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ စ၍ မီးလောင်နေကြောင်း သိရသည်။
အကျဉ်းကျနေသူများက အဆောင်များကို စတင် မီးရှို့ကြောင်း၊ စခန်းကို လျှပ်စစ်စည်းရိုးဖြင့် ကာထားသောကြောင့် ထွက်မပြေးနိုင်ပဲ ပိတ်မိနေကြကြောင်း အကျဉ်းကျခံနေရသူ ကိုဇူလိုင်က ပြောသည်။
“A အဆောင်ကို မီးနဲ့ရှို့ပြီးတော့ ဖောက်ထွက်ကြတယ်၊ အခုကျနော်တို့ ပိတ်မိနေတယ်၊ မီးညွန့်က သိပ်တော့ မတက်သေးဘူး” ဟု အကျဉ်းကျခံနေရသူ ကိုဇူလိုင်က မဇ္စ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
Bangladeshi policy discriminates against persecuted Burmese Muslims
ByIINA– April 4, 2011
DHAKA (Bangladesh), 1 Jumada 1/April4(IINA)-Persecuted Rohingya Muslims seeking refuge in Bangladesh faceanew grave threat to their safety and security: institutional discrimination in the form ofamandatory, country-wide ID card policy. The Rohingya population is the most persecuted ethnic minority of Burma. Rohingya individuals, fleeing their country from widespread and systematic persecution, do not deserve the inhumane treatment they receive in Bangladesh today.
လူသားတိုင်း ရသင့်ရထိုက်သော ရပိုင်ခွင့်၊ ခံစားခွင့် များကို လူမျိုးဘာသာမရွေး ရရှိသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ Human Rights – (လူ့အခွင့်အရေး) ကိုတန်ဖိုးထားရာ ရောက်ပါမည်၊ Human Rights သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးတွင် အဓိကအခြေခံကြသော မရှိမဖြစ်အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် Human Rights ကို လေ့ကျင့်မှု၊ တန်ဖိုးထားမှု အားနည်းသော စစ်အစိုးရလက်အောက်ရှိ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများသည်လည်း အနဲနှင့်အများ Human Rights ၏ တန်ဖိုးကို အပြည့်အဝနားမလည်ကြပါ။ ယ္ခုအချိန်သည် မြန်မာလူမျိုးများ အားလုံးအတွက် မျက်စိဖွင့် နားပွင့်၍ လူမျိုးဘာသာမရွေး အတူလက်တွဲရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်ပါက စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲ၊ မှိုင်းတိုက်၊ သွတ်သွင်းခြင်း၌ ဆက်လက်၍ ဝဋ်ခံနေရဦးပေမည်။
နောက် အဓိကအချက်တစ်ရပ်သည် ဘာသာရေးသွေးခွဲမှုဖြစ်ပေသည်။ နအဖ၏ နိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ်အောင်ဖန်တည်းရေးမူတွင် ထိုအချက်သည် အရေးအပါဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး လက်နှက်ဖြစ်ပေသည်။ ယ္ခု ထိုလက်နှက်ကို နအဖ မှ အပူတပြင်းအသုံးပြုနေပါသည်။ အထူးသတိပြုကြပါ။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကို ဖော်ဆောင်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နှင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များ အတွက်ဖြစ် အထူးသတိရှိကြပြီး အမြင်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် နားလည်မှုရယူ၍ ဘာသာရေးအစွန်းမရောက် ကြစေလိုပါ။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်လည်း အထူးတိုက်တွန်းလိုသည်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားသည် မေတ္တာတရားနှင့်သာ လူသားများကိုကယ်တင်ခဲ့ပါသည် တခြားဘာသာကို မုန်းတီးပါဟု မဟောကြားခဲ့ပါ။ ယ္ခုအချိန်သည် နအဖစစ်အစိုးရကိုသာ အဓိကထားတိုက်ခိုက်ကြပါ၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ဘာသာအချင်းချင်း လူမျိုးအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ရမည့်အချိန်မဟုတ်ပါ။ ကျတော်တို့စည်းလုံးမှ အောင်ပွဲရပါမည်။ စည်းလုံးကြပါ။ ညီညွတ်ကြပါ။
အမြင်မရှင်းသည်များရှိပါက ရှင်းလင်းမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များကို သတင်း ရက်စွဲ အတိအကြဖြင့်ဖော်ပြထားသော ခွပ်ဒေါင်းသွေး မှ ရယူ၍ ထက်မံမျှဝေလိုက်ရပါသည်။
မြန်မာစစ် အစိုးရ သည် ယခုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ အရေးနှင့်ပါတ်သက်၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့သည်မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုမဟုတ်ပါ ၊ ရိုဟင်ဂျာ များ သည် မြန်မာပြည် နှင့်မသက်ဆိုင် ကြောင်း ကို နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများမှ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန် ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းအဆက်ဆက်တွင် ရိုဟင်ဂျာ များအားမြန်မာအစိုးရတို့က တိုင်းရင်သား လူမျိုးစုတခု အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ပါသည်…။
> မြန်မာပြည်အတွင်းတွင် ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်ကပင် အခြချနေထိုင်လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တို့ သည် ရခိုင်ပြည်လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်နီးပါးရှိသည်။ ထို့အပြင် ( ၁၉၄၇-၁၉၇၄ ) ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရလည်းကောင်း ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှု့ ဥပဒေ နှင့်၁၉၈၂ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေများအရ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် ၁၈၂၃ ခုနှစ်မတိုင်မီကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပင်မနိုင်ငံအဖြစ် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးစု များဖြစ်ခဲ့သည်ကို အတည်ပြု ပြောဆိုနိုင်ပါသည်…။ နိုင်ငံသား ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ်ခြင်းသည် ကိုးကွယ်မှု့၊ ယုံကြည်မှု့၊ ဘာသာစကား ၊ အရုပ်သဏ္ဍန် ၊ အမျိုးအနွယ်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပဲ ရှေးအစဉ်အဆက် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံတခုအတွင်းရှိဒေသ နှင့်သာသက်ဆိုင် သည်ဟု သမိုင်းစာအုပ်အချို့တွင်ဖော်ပြထားပါသည် ။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ခေတ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ များအား အစိုးရပြန်တမ်းများတွင် မွတ်စလင် ၊ မဟာမေဒင် အစရှိသည်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည် ။ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတ်လ တွင် စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ ဆုံ ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအခွင့်အရေးများအပြည့်အ၀ပေးမည်ဟုကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည်များရှိခဲ့သည်။ မြန်မာ့တော်လှန်ရေးသမိုင်းများတွင်လည်း တော်လှန်ရေးကာတလျှောက် လက်တွဲပါဝင်ခဲ့သူ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတော်လှန်ရေးသမားတဦးဖြစ်သည့် ရွှေဓါး ကာဇီ (ခ) မင်းပြား သည် ချင်းပျံ နှင့် အတူ လက်တွဲ ကာတော်လှန်ခဲ့သည် ။ စစ်တွေမြို့တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားဆရာကြီး ဦးဇိုင်နဒိန် က ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသားကျောင်းတကျောင်းဖွင့်လှစ်ကာ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးအတွက် အမျိုးသားရေးစိတ် နိုးဆွပေးခဲ့သော အမျိုးသားကျောင်း တကျောင်း တည်ထောင်ခဲ့သည် ။
သို့သော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်နောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာ များအား နိုင်ငံရေး ၊ လူမှု့ရေး ၊ စီးပွားရေး တို့ တွင် နိုင်ငံတော်မှ လစ်လျှုရှု့ ခံထားံရမှု့ကြောင့် ( မူဂျာရစ် ) သူပုန်များအမည်ခံကာ ( ဗ-က-ပ ) ( ကရင် ) တို့ နှင့် မရှေးမနှောင်းမှာပင်သူပုန်ထကြွခဲ့ပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက ရိုဟင်ဂျာ များအား အခြားတိုင်းရင်းသားများနည်းတူ တန်းတူအခွင့် အရေးများပေး မည်ဆိုသော ကတိက၀တ်ကြောင့် ( ၁၉၆၁ ) တွင်တယောက်မကျန်လက်နက်ချကာ ပြည်ထောင်စုအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့ကြသည် ။
ထိုအပြင် ဒိုင်အာခီခေတ်မှမြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ခေတ်အထိ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ပါလီမန် နှင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်များတွင်ကိုယ်စားပြုခွင့်ရခဲ့သည် ။ ပ-ထ-စ ခေတ် တွင် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်မှာ တင်မြှောက်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်တဦးသည် ၀န်ကြီးရာထုး အထိရခဲ့ဘူးသည် ။ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားများထဲမှ လည်း ပါလီမန်အတွင်းဝန်များအထိရှိခဲ့ ဘူးသည်ဟု မှတ်တမ်းများ အရ သိရှိခဲ့ရပါသည်။
( ၁၉၆၀ )ပြည့်နှစ်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခန်းအနားကို အောင်ဆန်းအားကစားပြိုင်ဝင်း အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု့ ပြပွဲပြိုင်ပွဲတခုဖြစ်သော ကျင်ပွဲ ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခွင့် ရခဲ့ပါသည် ။ ၎င်း ကျင်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သော ကျင်သန်များမှာ-
( ၁) ကျင်သန် ဦးဟာကိမ်အလီ
မှတ်ပုံတင်အမှတ် - AK – ၀၄၂၉၅၇
( ၂ ) ကျင်သန် ဦးမာမတ် ဟူဆင်
ထို့နောက် မြန်မာ့အသံ တိုင်းရင်းသား အစီအစဉ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာ စကားကို နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ( ၅ ) နှစ်တိုင်တိုင် အသံလွှင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည် ။ မြန်မာအသံမှ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှု့ကို ( ၁၉၆၁ ) ခုနှစ် မေလ ( ၁၅ ) ရက်နေ့ညနေ ( ၅း၃၀ ) မှစတင်ကာ လှိုင်းတိုမီတာ ၆၂ .၆၇ နှင့် ၂၆ . ၁၇ တို့ မှ ရိုဟင်ဂျာဘာသာဖြင့် တိုင်းရင်းသားအသံလွှင့်အစီစဉ်များတွင် တပါတ်လျှင် သုံးကြိမ် ထုတ်လွှင့် ခဲ့ပါသည် ။
> ၁၉၅၉-၆၀ နှင့် ၁၉၆၀-၆၁ ပညာသင်နှစ်များတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအသင်းကို တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များက ဖွဲ့ စည်းခွင့် ပြုခဲ့ပြန် သည် ကိုပုံပါအတိုင်းတွေ မြင်နိုင်ပါသည် ။
> ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၁၉၇၈) -ခုနှစ်ထုတ်မြန်မာနိုင်ငံ ပထ၀ီဝင် အထက်တန်းကျောင်းသုံးပြဌာန်းစာအုပ် ၊ စာမျက်နှာ ( ၈၆ ) ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပြန့် နှံနေထိုင်ပုံပြ မြေပုံတွင် လည်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့ ၏နေထိုင်ရာဒေသ ကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည် ကိုမြင်တွေ့ နိုင်ပါသည် ။
အထက်ပါ သမိုင်းအချက်အလက်များ လေ့လာကြည့်ရှု့ခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိ စစ်အစိုးရ သည် ၎င်းတို့ အားထိပါးလာမည့်ပြသနာများအတွက်ဆိုပါမူ လူတဦးတယောက်ကို မဆိုထားနှင့်လူမျိုးစု တစုလုံး ကို ပါ ဥပဒေမဲ့ မျက်ကွယ် ပြုမူတတ်သည် ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်နိုင်ပါပြီ ။ ပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည် ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း လုံးဝမရှိသည့် အစိုးရဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ ကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ နှင့် ပြည်သူများသည် လက်ရှိပြုလုပ်နေသော စစ်အစိုးရ ၏ အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် စည်းရုံးသွေးဆောင်နေမှု့ များကို လက်မခံပဲ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသော စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် စည်းစည်း လုံးလုံး သိုက်သိုက် ၀န်းဝန်း ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့ဟူ၍တိုက်တွန်း နိုးဆော်လိုက်ရပါသည် ။
( ၁၄၄ ) မျိုး နှင့် နိုင်ငံခြားသားလူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုးရှိခဲ့
လူတိုင်းတိုင်းသည်နိုင်ငံချစ်စိတ်ထားရှိရမည်။မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်နိုးသည်ဆိုပြီး လူမျိုးကို ခုတုံး လုပ်ပြီး တိုင်းပြည်မငြိမ် မသက်ပြု လုပ် သူသည် နိုင်ငံတော်သစ္စဖေါက်ဖြစ် သည်။ တိုင်း ပြည် တည်ငြိမ် အောင်၊ အန္တရယ် မ ရောက် စေရန်အကာအကွယ်ပေး ရန်နိုင်ငံသား တိုင်း တွင် တာဝန်ရှိသည်။ သမိုင်း အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ပြီး လူမျိုးရေး ပုတ်ခတ် ပြော ဆို ကာဝါဒဖြန့်ချီခြင်း၊ ၀ပ်ဆိုဒ်အသီသီး မဟုတ် မမှန် လုပ်ကြံပြောဆို ရေးသားခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း စိတ် ၀မ်း ကွဲအောင်ဖန်တီးပြီး လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ် အောင် ဖန်တီး သူများ သည် နိုင်ငံတော် သစ္စဖေါက်များဖြစ် သည်။ တိုင်းချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်မရှိသူဖြစ်သည်။၀ပ် ဆိုဒ် အသီးသီး တွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနှင့်ပါတ်သက်၍ သမိုင်း အမှန်က ဖုံးကွယ်ပြီးမဟုတ်မမှန် လီဆယ် ရေး သားကာ တိုင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်မှု ပြိုကွဲအောင် လုပ်ပြီး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ ကုလားရခိုင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ပြသနာ ဖန်တီး နေခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့သဘောထား (၄)ခုအနက် ၂ ခု ဖြစ်သော
ထို့ကြောင်း ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံတော် ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပျက် ပြားသွားစေရန် လုပ်ကြံဖန် တီးနေသဖြင့် သမိုင်း ပညာရှင် များက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှင့်ပါတ် သက် ၍ မည်ကဲ့ သို့ရေး သား ဖေါ်ပြထား သည် ကို တိုင်းရင်း သား အားလုံးက သိရှိစေရန် နိုင်ငံတော် အပေါ် စေတနာမေတ္တာရှေ့ ထားပြီး အခုလို ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို သမိုင်းအထောက် အ ထားနှင့် တကွ ရေးသား တင်ပြခြင်းဖြစ် ပါ သည်။ဝပ်ဆိုဒ်အသီးသီး`၌မဟုတ် မမှန်ရေး သားပြီးသွေး ထိုးလှုံ့ဆော် သူမှာဘင်္ဂလားဒေရ်ှဘက်မှာခိုးဝင် နေထိုင်သော အနောက်သား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင် လူမျိုးများဖြစ် သည်။ ရခိုင်ပြည်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေရ်ှဘက် မှာခိုးဝင်နေ ထိုင်သော အနောက် သား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင် လူမျိုး မှာ အနည်းဆုံးခန်းမှန်းခြေ ၃၅ % ခန့်ရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်တွင် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှမှနိုင်ငံခြားသား ရခိုင်လူမျိုးများ ၀င်ရောက်နေ ထိုင် အ ထောက် အထား တစ်ခု တင်ပြရလျှင် ယခင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီကောင်ဥက္ကဌ ဖြစ် ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးကျော် မောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွါးမြန်မာ နိုင်ငံသား မဟုတ်ကြောင်း တိုင်ကြား ခံရပြီး နောက် ပြည်နယ်ပြည် သူ့ကောင်စီဥက္ကဌရာထူးမှ ဖြုတ်ချခဲ့သည်ကို ထောက်ရှူ လျှင် ရခိုင် ပြည်တွင်အနောက်သားရခိုင် လူမျိုး မည်မျှဝင်ရောက်နေထိုင်ကြောင်းခန်းမှန်းနိုင် သည်။ ထိုအနောက်သားရခိုင်းသားများ ကို လ၀က ရုံးတွင် စာ ရင်းသွင်းပေး၊သန်းကောင်စာရင်းများပြု လုပ်ပေးပြီး ဒေသခံ ဖြစ် အောင် လုပ်ပေး သော်လည်း ၎င်းတို့၏ မူရင်းအမည်စာရင်းမှာ(လ၀က) ရုံးချုပ် တွင်လုံ့ဝမရှိနိုင်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံ တော် အစိုးရက ထိုကဲ့ ခိုးဝင် လာသော ရခိုင်သား များ ကိုဖေါ်ထုတ်အရေးယူမှသာလျှင် တိုင်း ရင်းသား အချင်း ချင်း ကြားတွင် သွေးထိုး မှု၊ လုပ်ကြံလီ ဆယ်မှု၊ စိတ်ဝမ်းကွဲပြု လုပ်မှုများ လျော့ပါးသွား မည်ဖြစ် သည်။
ထို့ကြောင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးက ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းအမှန်ကိုသိရှိနားလည်ပြီး အနာဂါတ် စည်းလုံး ညီညွတ် မှု မပြိုကွဲ ဘဲ အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရန်နှင့် အနောက် သားရခိုင် လူမျိုး များက ပွဲလန့်အောင် လုပ်ပြီးဖျာ ခင်း နိုင် ရန်ကြိုးစာ;ခြင်းကိုတားဆီးနိုင် အတွက် တာဝန် သိပြည် သူ တစ် ယောက် အနေဖြင့် အပြု သဘောဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း အထောက် များကို ရှာဖွေစုစည်း တင်ပြပါ
ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝ်ကြီးဌာန၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီး ဌာန မှ ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသော (ပုံစံရေးသွင်းရန်ညွှန်ကြားချက် ) စာအုပ်စာ မျက် နှာ ( ၄၃ ) ပူးတွဲ (က) လူမျိုးများစာရင်းခေါင်းစဉ် အောက်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ ( ၁၄၄ ) မျိုး နှင့် နိုင်ငံခြား သား လူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုး ဟုဖေါ်ပြထားသည်။
ကိုးကား။ ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဘဝသစ်ထူထောင်ရေးပါတီသတင်းလွှာ(ကင်းလွှတ်ခွင့် သက် သေခံ လက်မှတ် –အမိန့်အမှတ် ၂/၈၉ အရ ၁၉၈၉ ကင်းလွှတ် အမှတ် န/သ-၀၈၅ ဖြင့်)အထက် ပါလူမျိုးများတွင် ဒိုင်းနက်လူမျိုး၊သက်လူမျိုး၊ မရမာကြီး လူမျိုး၊ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တို့ ၏ဘာသာ စကားများ တူညီနီးစပ်ကြသည်။ဒိုင်းနက်၊ သက်၊မရမာကြီး တို့သည် ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး များသည်အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြ သည်။
ဒိုင်းနက်လူမျိုးများသည်မွတ်ဆလင်အနွယ်များဖြစ်ခြင်းဒိုင်းနက်လူမျိုးသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွင်၇ှိအများအားဖြင့်ရခိုင်ပြည်မြောက် တွင်နေ ထိုင် ကြောင်း တွေ့ရသည်။ မွတ်ဆလင် အနွယ်များဖြစ်သည်။ စစ်တွေဂေဒဇေတိယား အပိုင်း (က) စာမျက် နှာ(၉၁) အရ ထိုဒိုင်းနက် တို့သည် တိဗက်မြန်မာ အနွယ် ဖြစ်ပြီး စစ်တကောင်း သွေးနွယ်သည် စစ်တ ကောင်း စကားပြောသည်။အဝတ်ဖြူဝတ်တတ်ပြီးတစ်ခြား လူမျိုးများနှင့်ရောနှော ခြင်းမပြုကြပေ။ရခိုင် ဘုရင်၏ ဖမ်းဆီးခံရသောကျွန်မွတ်ဆလင် များနှင့်အဆက် အနွယ်ဖြစ်ကြ သည်။ ယခုအခါဒိုင်းနက်တို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။ဘင်္ဂလားဒေရ်ှစစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသတွင် ဒိုင်းနက် (ချက်မား) တို့က သီးခြားပြည်နယ် ရရှိထားသည်။
ဦးနေဝင်း(မဆလ) အစိုးရက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု (၁၄၄)မျိုးရှိရာမှ (၈)မျိုးဖြုတ်ချခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာလူ မျိုး ကို လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်၍ဖြုတ်ချခဲ့ဖြစ်သည်။
စာအုပ်၏စာမျက်နှာ(၈၆)တွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံပြမြေပုံတွင်ရခိုင်ြံပည်နယ်တွင်စစ်တွေလွင်ပြင်တွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးကိုထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားသည်။၎င်းပထ၀ီဝင်စာအုပ်ကို၁၉၇၈ ခုနှစ် က မြန်မာဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊
ကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီကထုတ်ဝေ၍ ကျောင်တွင်သင်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။(၁၉၇၈ -ခု –၇တန်း၊၈တန်း၊၉တန်း ၊၁၀ တန်း ပထ၀ီဝင်
စာအုပ်စာမျက်နှာ -၈၆ မှမူရင်းပုံကိုစကင်ဖတ်၍အောက်တွင်တင်ပြထားပါသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ တည်ငြိမ်စွာဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ် သည်။ ရခိုင် ဘုရင်နရမိတ်လှ လက်ထက်ဝန်ကြီးရာထူး၊ စစ်တပ်၊ ရေတပ်၊ ဗိုလ်မှူးရာထူး များ ၌ လည်း ကောင်း ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အစုအဝေး လူမျိုးစု ပင်ဖြစ် သည်။ မွတ်စ လင်မ် စာဆိုတော် စိုင် ယက်ဒ်ရှားအာလ်ဝါလ်(Sayued Shah Al wal) ၏ အဆိုအရ စန္ဒသူဓမ္မ ဘုရင်၏ နန်းရင်းဝန် ] `မာဂန်´မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဖြစ်သကဲ့သို့ဆိုင်ယက်မုဆာ (Sayed Mussa)၊ မူဂျာဟစ် (Mujaehi နှင့် ဆုလေမန် (Sulaiman)တို့မှာ ရခိုင်နန်းရင်း ၀န်ကြီးများ ဖြစ်ကြပြီး အရှရက်ဖ်ခန် (Asharaf Khan) မှာ စန္ဒသုဓမ္မ ဘုရင်၏ စစ်သူကြီး ဖြစ်ကြောင်း။
၁။ MKရာမန်-ရ ၂။ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၀-ခု၊ မောင်သံလွင်၏ ရိုဝန်ညာလူ မျိုးများ။မဇ္စိုမဒေသ အန္ဒိယတိုက်၏ အရှေ့ ဘက်ဒေသနေထိုင်သူများကို အနောက်ဘက်ဒေသအခေါ် အဝေါ်ဖြင့် ရခိုင်ညာ၊ ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းသား ဟုခေါ်ဆို သကဲ့သို့ ရခိုင် တောင်ပိုင်း သားတို့က လည်း ရွမ်းကိုင်ညာ၊ ရွမ်းကိုင် ညာ ခေါ်ဆိုကြရာမှရိုဟင်ညာ၊ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်လာ သည်။ “ဘင်္ဂါလီ ဒေသ၏ အရှေ့ ကမ်း ရှိ လူ့ အစု အဝေး´´ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။အချို့က ရွာဟောင်း နေ ထိုင် ကြ သည့် ကျား ကဲ့သို့ စွမ်း ရည် သတ္တိ ရှိသည့် လူမျိုး၊ ရွာဟောင်း မှကျား၊ ရွာဟိန်းကျားမှာ ရိုဟင်ဂျာဟု ကောက် ချက်ပြုခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအား ၁၉၅၄-ခု၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်၊ည(၈)နာရီ ၀န်ကြီးချုပ်
ဦးနု၏ အသံလွှင့်မ်ိန့်ခွန်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုသကဲ့သို့ ၁၉၆၁-ခု၊ မေလ(၁၅) ရက်မှ
စတင်ကာ တပတ်(၃)ကြိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာဖြင့် မြန်မာ့အသံမှ အသံလွှင့်ပေးခဲ့သည်။
၁၄။-ဦးကျော်ငြိမ်း၊ မာတလိ၊ နှစ်၃၀ မြန်မာ့အသံ၊ စာမျက်နှာ-၇၁ခိုင်နှင့် မြန်မာပြည်ရှိမွတ်စလင်မ်လူမျိုးများ ရာဇ၀င်။
၁၅။-ကစ္စပနဒီမှဓညဝတီသစ္စာ(၂၀၀၈ ခုနှစ် စာပေဗိမာန်စာမူ ဆုရ ) Read More
ဗမာတွေရဲ့ ကိုယ်တွင်း မကောင်းဆိုးဝါးများ -ဒေါက်တာ ဇာနည်
Funding Opportunity Announcement Bureau of Population, Refugees, and Migration April 1, 2011